Hooyo umul aheyd iyo canugii ay dhashay oo 40-cesho jira oo ladilay | Wardoon
Home Somali News Hooyo umul aheyd iyo canugii ay dhashay oo 40-cesho jira oo ladilay
Hooyo umul aheyd iyo canugii ay dhashay oo 40-cesho jira oo ladilay
Xoghayaha degmada Warsheekh Cabdullaahi Raage Colow oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dil argagax leh oo xalay dad isku qoys ahaa loogu geystay duleedka degmadaasi oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe.
Colow ayaa sheegay in haatan ay wadaan baaritaano dheeraad ah oo ku aadan dhacdadaasi oo ay geysteen maleeshiyaad hubeysan oo goobta ka baxsaday.
Sidoo kale xoghayaha ayaa intaasi ku daray in ay tuhun weyn ka qabaan falkaas inuu salku kayo aano qabiil, sida uu hadalka u dhigay.
Xoghayaha ayaa hoosta ka xariiqay in dhacdadaasi ay aheyd mid arxan darro ah oo lagu beegsaday dad birimi-geydo ah oo haween iyo carruur isugu jiro.
Weerarkaas waxaa lagu dilay Hooyo umul aheyd, canugii ay dhashay oo 40-cesho aan gaarin iyo wiil kale oo ay dhashay oo 3-sano jir ahaa, halka la dhaawacay haweeney qoyska ka mid aheyd iyo wiil 5 sano jir ah.
Si kastaba weerarrada noocaan ah ayaa mudooyinkii dambe ku soo badanayey gobolka Shabeellada Dhexe, laba bilood ka hor, 17-kii Sebtember ee sanadkan ayaa sidaan oo kale koox weerar u soo qaaday waxay hal meel ku dishay lix culumo ah oo Qur’aan akhris ku jirtay, iyagoo dhaawacay mid kale, waxuuna falkaasi ka dhacay duleedka Raaga-Ceelle.
Previous articleMan City Iyo Liverpool Oo Ku Hishiiyay Bar-bar Dhac+SAWIRRO
Next articleKenya oo dadka Soomaaliyeed u fududaynayso fiisaha dal ku galkeeda
Xildhibaanada Hawiye oo bilaabay raadinta kuraasta kaga maqan Konfurglbeed +SAWIRR
Daawo:- Madaxweyne Farmaajo Badda Somaliya Wax wadda Hadal ah marna kama...